Go’aanka Neymar Jr oo ku riixaya kooxda Juventus inay sameyso heshiis muhiim u ah – Gool FM
Bruno Fernandes oo ka carooday Kooxda Manchester United kaddib markii uu fashilmay heshiiskii uu dhankooda ku aadi lahaa!
Man United oo wali aan ka quusan adeega xiddig ka ciyaara Premier League
Go’aanka Neymar Jr oo ku riixaya kooxda Juventus inay sameyso heshiis muhiim u ah
(Turin) 01 Sebt 2019. Sida ay shaacinayaan wargeysyada ka soo baxa gudaha dalka England maanta oo Axad ah, kooxda Juventus ayaa la filayaa in dhaq-dhaqaaq cusub ka sameyso inta ka dhiman suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England kooxda Juventus ayaa qorsheeneysa inay sameyso saxiixeeda ugu dambeeya kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga ee 2019/2020.
Naadiga Bianconeri ayaa qorsheeneysa inay la soo saxiixato xiddiga khadka dhexe ee reer Denmark iyo kooxda Tottenham Hotspur ee Christian Eriksen.
Qorshaha kooxda Juventus ayaa salka ku haya kaddib markii lagu fashilmay heshiiska la doonayay in Neymar Jr uu dib ugu laabto kooxda Barcelona, kaddib markii uu xiddiga reer Brazil uu go’aansaday inuu la sii joogo kooxda PSG xili ciyaareedkan.
Qandaraaska Christian Eriksen ee Tottenham ayaa dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedkna, sidaas darteed Spurs ayaa kaliya raadineysa 50 milyan ginni si ay ugu ogolaato xiddiga reer Denmark inuu baxo.
Tottenham ayaa isku dayday inay sii haysato adeega Christian Eriksen waxayna u soo bandhigtay mushahar todobaadle ah oo gaaraya 200 kun oo ginni, si uu u ogolaado inuu cusbooneysiiso qandaraaskiisa, balse wuxuu iska diiday dalabka kaga yimid Spurs-ka.
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay Liiska xidigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka adag caawa ee Villarreal